Psychology sy mpivady - Bezzia | Bezzia
Psychology sy mpivady
Ny vehivavy dia manome lanja lehibe ny fisehoany ara-batana, satria ankoatry ny fahasalamana sy tanjaka ara-tsaina dia tian'izy ireo ny ho tsara tarehy. Fa indraindray, afaka misy izy ireo olana anatiny izay mahatonga ny tontolon'ny olona iray hirodana: olana amin'ny ray aman-dreny, miaraka amin'ny mpiara-miasa, amin'ny fianarana, ny maha izy anao na ny toetrany.
Noho izany, namorona faritra izahay ho an'ireo lohahevitra ireo, Psychology sy mpivady, izay hanandrana manampy ny zazavavy mijaly amin'ireo olana ireo, ka mahatonga anay hahita zavatra izay angamba tsy hitantsika teo aloha. Na dia mazava aza fa tsy psikology izahay ary raha mijaly amin'ny aretina lehibe ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ity karazana matihanina ity, any Bezzia dia hanome torohevitra anao izahay izay hanampy anao hiatrika an'io karazana toe-javatra io.
Hanatona ireo olana ireo amin'ny fomba fijery tsara ihany koa isika: miresaka ny fomba hifaneraserana amin'ny ankohonantsika na ny fomba fampisehoana ny kanton'ny fanodikodinana. Liana ve ianao
ny Maria Jose Roldan hace Ora 14 .
Tsy misy isalasalana fa ny fitiavana dia mitaona mivantana ny toe-tsain'ny olona iray ...
Rahoviana no azo raisina ho marina ny fitiavana
ny Maria Jose Roldan hace Andro 2 .
Tsy mora na tsotra ny mahita ny tena fitiavana ary mankafy azy io. Ireo izay tsara vintana ...
Ny toe-tsaina dia manondro ny karazana tokana
ny Maria Jose Roldan hace Andro 3 .
Azo antoka fa toa mahazatra anao ity teny ity: "Aleo irery irery toy izay miaraka amin'ny naman-dratsy." Betsaka ny olona ankehitriny ...
Ny tebiteby sy ny adin-tsaina, inona avy ireo fahasamihafana?
ny Susana godoy hace Andro 4 .
Miaraka ny fanahiana sy ny fihenjanana isan'andro isan'andro. Satria samy eo foana izy roa ary mihaino resaka ...
Inona no atao hoe fifamatorana trauma?
ny Maria Jose Roldan hace 1 herinandro .
Ny fifandraisana dia tokony hiorina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fitiavana ny olona sy ny fikatsahana ...
Na dia mety ho lainga aza izany dia mbola betsaka ny mandroso amin'ny faritra mampiady hevitra toy ny ...
Matetika ny ankamaroan'ny olona dia mampifandray ny tsy fivadihana amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo, na izany aza, ny fifandraisana dia mety hitranga ...
Tsy azonao antoka ny fomba hampihenana ny fanahiana? Mazava ho azy fa tsy zavatra tena tsotra hotanterahina fa ...
Rahoviana no tokony handeha ho an'ny psychotherapy ny mpivady
Ny fahitana ny mpiara-miasa tonga lafatra dia zavatra irin'ny olon-dehibe rehetra mandritra ny androm-piainany. Ny…
Misy zavatra vitsivitsy tsara tarehy kokoa amin'ity fiainana ity noho ny mizara fitiavana amin'ny olon-kafa. Tsy misy olona…
Inona no mitranga rehefa betsaka ny olona voaray ao anaty fiarahana noho izay nomena
Voalaza matetika fa amin'ny fifandraisana salama dia manome fa tsy manantena valiny. Na izany aza, misy ny olona izay ...
Anus na fanadalana ny taovam-pananahana
Rehefa very ny filan'ny nofo ... inona no hatao?
Mitomany rehefa avy mifankatia
Ireo fambara mampiseho ny neninao taloha dia miala tsiny aminao fa navelany niaraka taminao izy
Rahoviana no lasa mpivady ny olon-tiana?
Misy lahatra ve ny fitiavana?
Rehefa tsy manaiky ny olon-tiako ny fianakaviako